'Ifa' liphelele, liyingozi, lenza ifilimu lenze ukukhathazeka
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo [Ukubuyekezwa kwe-SXSW] 'Ifa' liphelele, liyingozi, lenza ifilimu lenze ukukhathazeka
[Ukubuyekezwa kwe-SXSW] 'Ifa' liphelele, liyingozi, lenza ifilimu lenze ukukhathazeka
by UTrey Hilburn III Mashi 15, 2018
by UTrey Hilburn III Mashi 15, 2018 995 ukubukwa
Kusukela kwesibili impela Hereditary kuqala, uyazi ukuthi ulungele okuhlukile. Ukusondeza okuhamba kancane endlini yodoli efana nempilo eshintshela endlini yangempela kuyazazi kahle, udonselwa entweni engaphephile. I-riptide ebonakalayo eseduze ukukukhiphela olwandle olungenazwelo, nolumnyama.
Lolu daba lulandela umndeni wakwaGraham, obhekene nokulahleka kukamaskandi womndeni muva nje. Kungekudala ngemuva komngcwabo, umndeni uqala ukuthola ukuthi izimpande zokhokho babo zingaba nezibopho ezesabekayo.
Hereditary ukuhlaselwa kwamasu kubabukeli bayo. Ikhaya lomndeni wakwaGraham liyidokodo elingokoqobo eliphakeme, lihlala lizizwa lilahlekile ngempahla ethile enezindawo eziphakeme noma ubukhulu obudala ucezu oluncane lokungakhululeki kolunye uhlobo lomhlaba oluselusebenza kumqondo wakho wokubuka. Idizayini yomsindo iyinhliziyo eshaywayo eqhutshwa kabili edlalwa cishe sonke isenzo sokuqala sefilimu. Lezo zinto ezimbili ezihlanganisiwe sezivele zikuhlomulisa, ngaphambi kokuthi kwethulwe nezinto ezishaqisayo.
Okushaya ingqondo yami kakhulu ukuthi lo ngumqondisi, isici sokuqala sika-Ari Aster. Lo dude kumele ngabe waphila izimpilo eziningi njengomqondisi obekade edala, uzimisele ekwenzeni kwakhe amafilimu. Hereditary ukukhathazeka okuyingozi okuheha ukwenziwa kwamafilimu, i-Aster idala indlela entsha, eluhlaza futhi esabisayo yohlobo olwesabekayo.
Ifilimu ibingaba khona ngokuphelele njengedrama yomndeni futhi bekungaba mnandi. U-Aster unakekela ukwenza izinto zedrama zisebenze, ngenkathi ethula kancane kancane ukwesaba okunwabuzelayo. Okufana nokufaka ixoxo ebhodweni lapho izinga lokushisa likhula kancane, usuvele uphekwe ngobuningi bezithombe nemibono esabekayo.
Ngingumuntu othanda ukwethuka okuningi kwe-A24. Uhlobo lwama-Atmospheric amafilimu afana The Witch yizinkomishi zami ezithile zetiye. Hereditary ithatha izakhi zomkhathi futhi ingeza amandla adonsela phansi kubo ngokuletha kububanzi bokuthi yini izethameli ezethusayo ezithandayo (yebo, noma ezinye izinto eziphumelela ngokwedlulele) ezakha ifilimu ezwakala sengathi ingavala igebe labalandeli bokushisa kancane komkhathi kanye nezethameli ezijwayelekile kakhulu .
Izithombe ezisikwe kwifilimu zinamathela ekhanda lakho. Ngisacabanga ngakho manje. Kunemidlalo eminingi elandelwayo ehlakaniphe ngempela ngokwakha isipiliyoni sokukushiya unezithombe ezingekho nje kuphela kodwa nezinto ongafuna ukuya ekhaya ucwaninge.
Abalingisi abafakiwe ngobukhulu obumsulwa. UToni Collette nelungu ngalinye lomndeni wakhe bakubamba ngesandla ngezindlela ezijwayelekile, zomndeni ngaphambi kokushiya ulahlekelwe wedwa futhi ngaphandle kwekhampasi ekulandiseni komndeni okumnyama. Usizi nohlamvu olukhulu lukaCollette lwembula umsebenzi owethusayo futhi owakhiwe.
"Hereditary ukukhathazeka okuyingozi okuheha ukwenziwa kwamafilimu, u-Aster wakha indlela entsha, engavuthiwe neyesabisayo yalolu hlobo olwesabisayo. ”
Hereditary kuyimpumelelo enkulu yokwesaba okukhulu ngazo zonke izindlela. Yenza izinto ezithile ezingaxegi ngenqubo yosizi namandla omndeni bese iziguqula ngendlela ecishe ibe yimbi. Yibhayisikobho enomoya omubi, inhloso yayo ukukudonsa futhi isebenze ngokuphelele kimi. Ukusuka lapho ngihleli khona, ayikho indlela yokuthi le filimu ingagcini ohlwini lwami olu-5 oluphezulu ekupheleni konyaka. Le filimu iyingozi futhi angisakwazi ukulinda ukuyibona futhi.